Ezviz CTQ2C, इनडोर वाइफाइ निगरानी क्यामेराको समीक्षा ग्याजेट समाचार
हामी फेरि एक्चुलीडेड ग्याजेटमा परीक्षण गर्दछौं वाइफाइ निगरानी क्यामेरा। यस अवसरमा, इज्विज फर्मको हातबाट हामी यसलाई हेर्न सक्षम भएका छौं Ezviz CTQ2C। एक क्यामेरा जसले सबै सुविधाहरू जोड्दछ जुन हामीलाई सामान्य प्रयोगको लागि आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो घर, तपाईंको व्यवसाय वा कार्यालयमा निगरानी खोज्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईं मासिक शुल्क तिर्न रुचि गर्नेहरूमध्ये एक हुनुहुन्न, इज्विजले हामीलाई रोचक विकल्प प्रदान गर्दछ। वाइफाइ क्यामेरा हुन सक्षम छ सँधै सचेत र सबै कुरा रेकर्ड गर्नुहोस् हामीलाई कहिले पनि चाहिन्छ। अरु के छ त, अस्थायी रूपमा हामी तपाईंलाई २०% छुट सहित एक विशेष कोड प्रस्ताव गर्दछौं.
1 कुनै मासिक शुल्कको साथ प्रभावी निगरानी
2 Ezviz CTQ2C -TT2 को डिजाइन र उपस्थिति
3 धेरै थोरैको लागि हाम्रो टेक्नोलोजीमा टेक्नोलोजी
4 प्राविधिक विवरण तालिका
5 इज्विज CTQ2C क्यामेराको पेशेवर र विपत्ति
कुनै मासिक शुल्कको साथ प्रभावी निगरानी
वाइफाइ निगरानी क्यामेरा घर स्वचालन होममा एक महत्त्वपूर्ण अंश हुन्। सक्छ प्रवेश गर्ने र छोड्ने को नियन्त्रण, वा ठ्याक्कै सावधान हुनुहोस् कि, कोही पनि प्रवेश गर्दैन, आवश्यक छ। र एक छ २ hour घण्टा निगरानी एक अलार्म वा सुरक्षा कम्पनी भाँडा बिना आवश्यकता यसको अर्थ बचत पनि हो। यहाँ तपाईंको EZVIZ CTQ2C निगरानी क्यामेरा खरीद गर्नुहोस् अमेजन मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा।
Ezviz फर्मले लामो समयदेखि सुरक्षा सम्बन्धी उत्पादनहरू बनाइरहेको छ। र यस वेबसाइटमा त्यहाँ धेरै चाखलाग्दो प्याकहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो घरको सुरक्षालाई थोरै पैसाको लागि लागू गर्न मद्दत गर्दछ। Ezviz CTQ2C क्यामेरा हो गुणस्तर र लाभहरू प्रदान गर्दछ को लागी एक स्टार उत्पादहरु.
भर्खर सम्म, निजी निगरानी प्रणालीहरू केवल तिनीहरूसँग पहुँच योग्य थिए जो सुरक्षा कम्पनीसँग ड्युटीमा मासिक शुल्क लिन सक्दछन्। अब, यस प्रकारको क्यामेराको wifi जडानलाई धन्यवाद, र हाम्रो स्मार्टफोनको डाटा जडान हामी हाम्रो घर जहिले पनि जडान गर्न सकिन्छ। तपाईंको घर वा तपाईंको व्यापार नियन्त्रणमा रहनु अब ठूलो लगानीको कुरा होइन। याद गर्नुहोस् कि जून until सम्म कोड BLUSENSCOM प्रयोग गरेर तपाईंले २०% छुट पाउनुहुनेछ।
Ezviz CTQ2C -TT2 को डिजाइन र उपस्थिति
Ezviz CTQ2C wifi क्यामेरा फिचर गर्दछaआधुनिक लाइनको साथ वर्तमान डिजाइन त्यो कतै राम्रो देखिन्छ। नेलहरू अन अंडाकार आकारहरू तल टेपर। Y राम्रो गुणस्तरको प्लास्टिक सामग्रीमा निर्मित र उच्च प्रतिरोध। कुनै श doubt्का बिना, एक आपसमा जडिएको घर उपकरणहरूको नेटवर्क पूर्ण गर्न एक उत्तम गौण। एउटा क्यामेरा जुन यो जानेर अझ रमाईलो हुन्छ एलेक्सा भ्वाइस सहायक संग संगत.
यो छ गोलाकार आधार, को बारे मा हामी यसलाई degrees 360० डिग्री घुमाउन सक्छौं। एक आधार जसले यसले इष्टतम रेकर्डिंगका लागि आवश्यक स्थिरता दिन्छ। यसको अगाडि लेन्सहरू छन्, जो भित्र रेकर्डि offers प्रस्ताव गर्दछ 720p HD गुणवत्ता। केवल तल छ गति सेन्सर। उसको शरीरको तल्लो भागमा, हामी फेला पार्दछौं दुई-मार्ग ध्वनि माइक्रोफोनहरू। हाम्रो वाइफाइ क्यामेरा बनाउन पनि एक विस्तार यो मार्फत कुराकानी गर्न को लागी सेवा गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो हेर्नुहोस् पछाडि, केन्द्रमा छ वक्ता। अपेक्षित भन्दा बढि पावरको साथ अडियो आउटपुट, जसको साथ यो अनुप्रयोगको माध्यमबाट कुराकानी गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ। उसको छेउमा छ माइक्रो एसडी कार्ड स्लट भिडियो भण्डारणको लागि। हामीसँग पनि छ रिसेट बटन जुन कारखाना सेटिंग्स र जडानहरू पुन: भण्डारण गर्न प्रयोग हुनेछ। र जडान पोर्ट टिकटको माध्यमबाट "जीवन दिनुहोस्" माइक्रो यूएसबी। यहाँ हामीले एउटा सानो बुट भेट्टायौं र त्यो यो हो कि यो क्यामेरा सँधै जडित हुनुपर्दछ किनकि यससँग ब्याट्री छैन।
यसको आधारमा हामी शक्तिशाली चुम्बक भेट्टाउँछौं त्यो हाम्रो सेवा हुनेछ कुनै ठाडो सतहमा क्यामेरा राख्न वा छतमा पनि। चुम्बकित टुक्राको साथ जुन स्क्रु गर्न सकिन्छ वा कहिँ पनि चिपकाउन सकिन्छ, इज्विज क्यामेरा सुरक्षित र स्थिर पकडको साथ "स्टिक" हुन्छ। अर्को विवरण जुन हामीलाई मनपर्दछ र त्यो उपयोगी छ। यदि यो तपाइँ तपाइँको घर को लागी एक सुरक्षा प्रणाली को रूप मा विश्वस्त छ अब तपाइँको EZVIZ CTQ2C निगरानी क्यामेरा अमेजनमा खरीद गर्नुहोस्.
जून6L BLUSENSCOM until सम्म प्रमोशनल कोड मान्य प्रयोग गर्नुहोस् र २०% छुट पाउनुहोस्
धेरै थोरैको लागि हाम्रो टेक्नोलोजीमा टेक्नोलोजी
जस्तो कि हामीले पहिल्यै टिप्पणी गरिसकेका छौं, इजविज फर्मसँग छ राम्रो प्रतिष्ठा प्रस्ताव गर्न सक्षम भएकोको लागि पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्यको साथ उत्पादनहरू। Ezviz CTQ2C क्यामेरा यसको स्पष्ट प्रमाण हो। एक अपरिवर्तनीय मूल्यमा एक अत्याधुनिक निगरानी क्यामेराको सबै प्रविधि।
El दुई-मार्ग अडियो प्रणाली Ezviz ले यसको प्रयोग गर्ने छ पूर्ण अन्तरक्रियात्मक। यसको माइक्रोफोन, र यसको सानो तर शक्तिशाली वक्तालाई धन्यवाद। हामी फर्मको आधिकारिक अनुप्रयोग मार्फत कुराकानी गर्न सक्छौं। यसको माध्यमबाट बोल्नुहोस् वा ठूलो स्वरमा सुन्नुहोस् र अर्को अन्तमा भएको व्यक्तिले तपाईंलाई के भन्छ भनि स्पष्ट गर्नुहोस्।
यसका अतिरिक्त 720p HD रेकर्डिंग गुणवत्ता, Ezviz CTQ2C सुविधाहरू उच्च गुणवत्ता रात दृष्टि। नक्काशी गर्न योग्य .7,5..XNUMX मिटर टाढा। यो पनि एक छ गति सेन्सर जुन हामी स्वचालित रूपमा जडान गर्न कन्फिगर गर्न सक्छौं। हाम्रो स्मार्टफोनबाट कुनै पनि समयमा र कहिँ पनि यसलाई हेर्नको लागि हाम्रो व्यवसाय वा घरमा पहुँचको पूर्ण नियन्त्रण।
धन्यवाद २.2.4 GHz Wi-Fi जडान हामीसँग छ स्थिर र गुणस्तर छवि सबै समयमा। छविहरू फाईलिंग र रेकर्डिंगका लागि जुन हामी चाहान्छौं हामी ए घुसाउन सक्छौं माइक्रो एसडी १२128 जीबी सम्म। यद्यपि हामी यो पनि छनौट गर्न सक्छौं क्लाउडमा रेकर्डि ofको सामग्री भण्डारण गर्न विकल्प त्यो Ezviz विभिन्न भर्ती प्याकेजहरु मा प्रदान गर्दछ। यसको लागि यसले कुनै पनि निगरानी कम्पनीबाट शुल्क लिन्छ EZVIZ क्यामेरा अब खरीद गर्नुहोस् र सबै कुरा नियन्त्रणमा छ।
La Ezviz अनुप्रयोग अनुकूलन डिजाइन गरिएको छ ताकि हाम्रो क्यामेराको प्रयोग सहज र सजिलो होस्। एक अत्यावश्यक उपकरण ताकि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं सम्भावित लाभहरू जुन Ezviz ले हामीलाई यो पूर्ण निगरानी क्यामेराको साथ प्रस्ताव गर्दछ।
विकासकर्ता: EZVIZ इंक।
आन्तरिक मेमोरी NO
आयामहरू 11 एक्स 5.8 एक्स 3.8
मूल्य 34.99 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् EZVIZ CTQ2C
प्रचार कोड BLUSENSCOM
इज्विज CTQ2C क्यामेराको पेशेवर र विपत्ति
यो अन्तर्क्रियात्मक वाइफाइ क्यामकोर्डरको साथ केही दिनको परीक्षण पछि हामी तपाईंलाई भन्न सक्छौं हाम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव। र यसैले के हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुहोस्, हाम्रो रायमा, क्यामेराहरू सुधार गर्न सकिन्छ जुनमा। साथ साथै हामीले मन पराउने पक्षहरू।
हामी पहिले छौं त्यो आधारबाट शुरू गर्दै एक उत्पादन जुन उच्च मार्क हुन्छ, विशेष गरी यो के प्रस्ताव गर्दछ र यसको मूल्य विचार गर्दै। केहि धेरै महत्त्वपूर्ण, मूल्य कारक, जब हामी छनौट गर्न सक्छौं विश्वसनीय र सुरक्षित सुरक्षा प्रणाली बिना मासिक शुल्कमा लगानीको आवश्यकता। र यो नबिर्सनुहोस् जुन6सम्म, सी प्रयोग गरेरप्रोमो कोड «BLUSENSCOM» तपाईंसँग २०% छुट हुनेछ अतिरिक्त।
La अन्तरक्रियाशीलता तपाईंको प्रणाली द्वारा प्रस्ताव गरिएको द्विदिशात्मक अडियो यो यसको ठूलो फाइदाहरू मध्ये एक हो।
El आधुनिक डिजाइन र कम आकार तिनीहरूले यसलाई एक ग्याजेट बनाउँदछन् जुन घर, कम्पनी वा व्यवसाय मा कहिँ पनि टुक्रिने छैन।
चुम्बक आधार र ठाडो सतहमा राख्नको लागि चुम्बकको साथ गौण।
अनुकूलन अनुप्रयोग जसले क्यामेरालाई अझ राम्रो बनाउँछ।
एलेक्सा संग संगत.
El चार्ज कनेक्टर मिनी USB थोरै कम रहन्छ र केबल अलि अप्राकृतिक रूपमा झुकाइन्छ।
यसको आफ्नै ब्याट्री छैन यदि हामी केबलको आवश्यकता बिना नै यो अस्थायी रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं।
योसँग कुनै आन्दोलन मोटर छैन त्यसैले हामी छविलाई हातैले नगरी घुमाउन सक्दैनौं।
नराम्रो रूपमा चार्जिंग कनेक्टर अवस्थित छ
आफ्नै ब्याट्री छैन
योसँग आन्दोलन मोटर छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » इनडोर वाइफाइ क्यामेरा Ezviz CTQ2C समीक्षा गर्नुहोस्